Muxuu dhoobo dhoobo | Saadaasha Shabakadda
La roob dhoobo Waa dhacdo saadaasha hawada ah oo qofna uusan jecleyn, gaar ahaan haddii gaarigaaga uu yaallo wadada. Si kastaba ha noqotee, waa iska caadi inay dhacdo xagaaga. Laakiin sababta?
Ha ka eegin kormeeraha. Ogow sababta roobku u dhoobo.
1 Sidee loo soo saaraa roobka dhooqada?
2 Waa dhacdo naadir ah?
Sidee loo soo saaraa roobka dhooqada?
Si roobku u keeno dhoobo waxaa lagama maarmaan ah inuu jiro a farqiga kuleylka inta udhaxeysa dhulka iyo lakabyada dhexe iyo sare ee jawiga. Heerkulka dusha sare, oo sarreeya, cufnaanta hawadu oo ay weheliso boodhku waxay gaari karaan heerar sare oo ka mid ah meelaha loo yaqaan 'troposphere'. Laakiin sheyku kuma ekaan doono: hawadan diirran waa inay ku dhacdo wax ka qabow si ay kor ugu sii kici karto xitaa sare, taasna waxaa sameyn doona nidaamka hawo ee hore ee aagga.
Nidaamkan wejiga hore wuxuu kala kaxeeyaa hawada diirran, taasoo keenaysa in culeyska cadaadiska uu kordho. Isla mar ahaantaana, xawaaraha dabaysha ayaa kordha, gaadha xitaa 160km / h. Marka sidaas la sameynayo, waxay la qaadaneysaa boodhkii horeyba ugu xirnaa plateaus-ka Waqooyiga Afrika. Marka sidaas la yeelo, waxay samada ka dhigaan mid midabkeedu u eg yahay opal. Waa inaan lagu qaldin dabeylaha, maxaa yeelay walxaha ciiddu xoogaa weynaadaan, kana weyn yihiin 100 mikroon.
Waa dhacdo naadir ah?
Maya. Xaqiiqdii, jasiiradaha Canary aad ayey caan ugu yihiin, waxay ugu dhawdahay qaaradda Afrika. Waxaa sidoo kale lagu soo saaraa Jasiiradda Jasiiradda iyo jasiiradaha Balearic, ugu yaraan sanadkiiba mar. Sikastaba xaalku ha ahaadee, ma keenayaan wax khatar caafimaad ah, wax iska soo horjeed ah: waxay nadiifiyaan jawiga boodhka la hakiyay, si dadka qaba dhibaatooyinka neefsashada ay u dareemaan wanaag, taas oo aan haba yaraatee wax xun ahayn, sax? 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Maxaa dhoobo roob u da’ayaa
Iyo su'aal, haddii Afrika marka laga reebo u oggolaan la'aanta taranka, geed yar ayaa la beeri doonaa. Miyay u adeegi lahayd in yar oo gaabis ah boodhka karaahiyada ah iyo kuleylka halkaa ka yimaada? Kizas NGO-yada sidoo kale waxay weydiistaan ​​caruurta ay dhaleen dilalka xasuuqa ah ee waalidkood, iyagoo og inay awoodi doonaan inay taageeraan, ma ahan kuwa la daaweynayo waxayna rajeynayaan in kuwa kale ay caawin doonaan. Ololahan, miyaanay iyagu codsan karin in ilmo kasta geed loo beero? Waxaan durba haystay caruur aan waxba galabsan oo ku dhashay dugaag dhaqaaqa kaliya x dareen daanyeer, kafaala qaaday, oo codsada waxyar oo dheeraad ah waxaan sidoo kale kafaala qaadi doonaa geedaha iyo qiimaha biyaha iyo dhiraynta Akello.
Haddaanan arag waxa Afrika ay tahay, waxaan u maleynayaa inayna macquul ahayn. Laakiin maya, waxay naftooda u hurayaan oo keliya inay halkaas ku dhalaan. Fadlan sii kiniiniyada ka hortagga uurka maxaa yeelay waxay ula dhaqmaan sida addoomo, kufsadaan ama si fudud waxay la mid yihiin xayawaanka ka fikiraya oo keliya wax soo saar iyada oo aan laga fekerin mas'uuliyadda keenista xayawaan aan waxba galabsan adduunka.
Waxaan rajaynayaa oo kaliya in faallooyinkaani kaftan yahay